खड्गप्रसाद ओली उर्फ के.पी ओली, नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा बढी सुनिने, तीखा कुरा गर्ने र अरूको बिल्ला गर्नमा नम्बर एक माहिर नेता । मलार्इ यिनका प्रायः सबै कुराहरू अचम्मका र अविश्वसनीय लाग्ने गर्दछन । आफू बाहेक अरू त नेतै हैनन् भन्ने सोचले यिनलार्इ यतिसम्म गाँजेको छ कि कुनै पनि कुरा उनको बाहेक अरूको सत्य नै हुँदैन । कहिले के भन्या छन् कहिले के ? एकनाशले कुरा सुन्दै जाने हो भने उस्तै मान्छे यिनकै सामुन्ने ठहरै हुन बेर लाग्दैन । एक महिना लामो क्यारेबियन क्षेत्र, अमेरिका र युरोप भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि कान्तिपूर दैनिकमा उनले दिएको अन्तरवार्ता पढ्दा, उनको अन्तरवार्ता पढ्ने जो सुकै नेपालीलार्इ लाग्न सक्छ कि नेपालको विद्ममान शान्ति प्रकियाको एकमात्र कुशल विश्लेषक तथा जानकार उनी मात्र हुन् ।
देशको बिग्रदो राजनैतिक स्थितीमा गहिरो चिन्ता ब्यक्त गर्दै जनताले आफूलार्इ पनि अरू नेतालार्इ जस्तो बकम्फुसे मान्ने हुन कि भन्ने ठूलो डर रहिछ बिचरा ओलीको । प्रधानमन्त्री चयन प्रकियाका विषयमा आफू निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण हैसियतमा नरहेको बताउँदै सही ढंगले राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढोस्, अन्य सामाजिक मुद्दा टुंगो लाग्न सकून् र संक्रमणकाललाई टुंग्याएर जान सकौं भन्नेमा नै आफ्नो जोड रहेको समेत बताएका छन् । तर उनका क्रियाकलापबाटै माओवादीलार्इ ठेगान लगाउने र जसरी हुन्छ मनोनित नै भएपनि सभासद पड्काएर प्रधानमन्त्री पदसम्मका लागि उक्लने दाउ रहेको भने प्रष्टै हुन्छ । बाहिर सफा र इमान्दार देखिए पनि उनले पर्दा पछाडी खेल्ने भूमिकाका बारेमा सबै नेपाली छर्लङ्गै छन । पार्टीका अध्यक्षले जनताहरूलार्इ दशैं अगाडि प्रधानमन्त्री उपाहार दिने कुरा फलाक्दै हिडिरहेका बखत उनले दिएको अन्तरवार्तामा भने चाडबाड समय भएकाले कुनै पनि हालतमा तिहार अगाडि प्रधानमन्त्री नचूनिने दावी व्यक्त गरेका छन् । यिनका कुराको के भर विश्वास र ? झन हालै नक्कली विश्वविधालयबाट विधावारिधी ग्रहण गरिसके पछि त झन उनका विचार पनि झन कमसल हुन थालेकोमा शंका नगरीबस्ने ठाउँ नै छैन । माओवादी लचक भएको प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउनका लागि मात्र हो भनेर देख्ने ओलीले माओवादी र एमालेबीच पछिल्लोपटक भएको तीनबुँदे सहमतीको समेत खासै महत्व नरहेको बताएका छन् । त्यो तीनबुँदे सहमति नै कपटपूर्ण धोखा भएको बताउँदै उनले भनेका छन् - सकारात्मक संकेतजस्तो लाग्ने यी जुन छलकपट छन् प्रधानमन्त्री हुने उद्देश्यले प्रेरित भएका कपटपूर्ण खेल हुन् । व्यवहारले अन्यथा प्रमाणित गरोस् । त्यसो भएमा बाहेक यस्तो छलकपटमा अलिअलि विश्वास गर्नु र धेरै अल्मलिनुपर्ने कारण छैन । अब सहमति प्रक्रियामा आफै बस्ने, हस्ताक्षर गरेको साक्षी हुने, सम्झौताको ड्राफ्ट पनि तयार पार्ने अहिले त्यही सम्झौता कपटपूर्ण खेल हो भनेर संज्ञा दिने के.पी. लार्इ हामी के भनौं ?
तर अन्तरवार्ता पढ्दै जाँदा उनले व्यक्त गरेको एउटा उत्तरले भने रामचन्द्र पौडेलको राजीनामा आएपछि सब ठीक हुन्छ भन्नेहरूलार्इ भने ठूलो झड्का दिनसक्छ । अन्तरवार्ताको क्रममा पौडेलको राजीनामा अत्तो थाप्नु भनेको पहिला हटिहाल अनि पछि सोचौंला भन्ने ठग कुरा जस्तै भएको बताएका छन । उनले गम्भीर रूपमा आपत्ती ब्यक्त गर्दै भनेका छन् बताएका छन् रामचन्द्र पौडेलले छोडिदिने अनि यो संसद्, संविधानसभा सबै 'फेल' भन्दै अराजकता सिर्जना गर्ने कदम हुन सक्छ । त्यसैले केमा सहमति गरेर को प्रधानमन्त्री बन्ने हो सहमति गरौं, पौडेलले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुपर्छ ।
अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ पर्न तलको लिंकमा थिच्नुहोस् ।